Na anyị gara aga post anyị kpuchie crank ikpe engine mmanụ, otú ego ya na ihe anya n'ihi. Na nke a post anyị ga-ekpuchi ịlele nnyefe ọmụmụ na ihe anya n'ihi.
Na-esote engine mmanụ, nnyefe mmanụ bụ eleghị anya ọzọ kacha mkpa ọmụmụ. Ọ dị oké mkpa n'ihi na akpaka transmissions ka nwere ndị na kwesịrị ekwesị larịị ka ha na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na-enwe nnyefe nnofega n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma hụ na ogologo ndụ.
Ihe mbụ anyị na-eme bụ ịga n'ihu na ego ọmụmụ larịị nke nnyefe. Chọpụta itinye mkpisi dọpụta ya pụta na-enweghị ụgbọala na-agba ọsọ. Mgbe ụfọdụ e nwere ntuziaka na itinye mkpisi na otú ego ọmụmụ. Ọzọkwa anya na ndị nwe ntuziaka ma ọ bụrụ na ị nwere otu dị, ntuziaka ga-emi odude ke idak fluids. Kasị emepụta na-egosi na ụgbọala kwesịrị na-ekpo ọkụ, engine na-agba ọsọ na-anọpụ iche. Hichapụ kwụsịrị dipstick na re-fanye ya na dọpụta ya ọzọ, ego na ọmụmụ bụ na-atụ aro ókè. Ọzọkwa na-esi isi ọmụmụ, ọ na-ekwesịghị nwere nsure isi. Kasị transmissions kwesịrị nwere red tint ha kwa na-abụ kpam kpam nwa (a na-adabere otú elu na agbara bụ na ụgbọala).
Na ụfọdụ ọhụrụ ugbo ala, nnyefe bụ kpamkpam anọkwasị unit, nke pụtara na ị na-apụghị tinye ma ọ bụ ọbụna ego ọmụmụ. Na ndị a na ugbo ala na ugbo ala na ị nwere ike ịlele myiri, anyị nwere ike ikwu na ị na-aga n'ihu ma na ụgbọala na ụgbọala. Ọ bụrụ na ụgbọala bụ oyi, mgbe ị na-akwọ ụgbọala, achọpụta ma ọ bụrụ na ụgbọala na-ebughari were were. Anyị na-amasị ime nke a ụzọ abụọ. One, si a zuru ezu nkwụsị, jiri nwayọọ na-enye ya ndị ọzọ trotul dị ka na nkịtị ịnya ụgbọ ala ọnọdụ. Nke abụọ, si a zuru ezu nkwụsị na-apụ ike na ngwa ngwa. The rpms ga-n'ozuzu-aga obere elu tupu engine akọwa mgbe anwale otú a. Ọ bụrụ na ị nwere onye nwe nke ụgbọala na ụgbọala nwere ike ị chọrọ ka ha mara ihe ị na-eme n'ihu aka nke mere ha ga-enweghị a nkụchi obi na-eche na ị na-agbalị na-akwa elu ụgbọala ha. Mgbe a nnyefe bụ oyi bụ otu oge mgbe Ọ ga-eme na-adịghị ịgbanwee were were. Ego ahụ iji mara ma rpms (engine revolutions kwa nkeji) na-agba elu na engine na-arụ ọrụ ike tupu nnyefe akọwa. Mgbe ụgbọala bụ ezi ihe na-ekpo ọkụ, mara ọzọ nke otú ụgbọala na-agbanwe agbanwe.
Na-agbanwe agbanwe nnyefe ọmụmụ abụghị ihe na-na-mere ka mgbe nile mere ka na-agbanwe agbanwe engine mmanụ. Otú ọ dị, ọ ga-agbanwe dị ka emepụta nwere ikwu. Ozi a ga-depụtara na ndị nwe ntuziaka, na Olileanya na-ere ere nwere otu. Anyị abụghị ndị na nnukwu Fans nke usoro na-agbanwe nnyefe ọmụmụ site na-ewere ya site erijueala tube. Ụfọdụ mmanụ mgbanwe ebe-eme nke a, na anyị ahụwo ebe ọ a mere mgbe a ụgbọala nwere 100,000 kilomita na ya emewo ihe ọjọọ karịa ezi. Mgbe ọ a mere ụgbọala agaghị ịgbanwee n'ụzọ kwesịrị ekwesị. -Aju mgbe niile onye nwe ọ bụrụ na ha nwere nnyefe serviced na otú ọ e serviced na ebe. Anyị na-akwado ma ọ bụrụ na ọmụmụ bụ ga-agbanwe na-aga n'ihu na dobe nnyefe pan na-agbanwe agbanwe nyo.
Egbu, gị mgbe niile na-achọ ime a ụgbọala na ị na-atụle ịzụta ka a gbaara ụgbọ na-enye ya a ozugbo n'elu tupu ịzụta. Ị kwesịrị ị na-na-a ụgbọala ọnọdụ akụkọ ịhụ ma ọ bụrụ na ụgbọala nwere ọrụ ndia dị site dealer. Mgbe ugbo ala na-serviced na dealer ha na-emekarị na-akọ ya ndị isi ụgbọala ọnọdụ akụkọ ụlọ ọrụ na-enyere aka na ndekọ nke ihe niile e dere ọrụ mere ụgbọala.